Ururrada diimaha Sweden oo ey cabsi la soo gudboonaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Goobta cibaadada ee Yuhuudda
Ururrada diimaha Sweden oo ey cabsi la soo gudboonaatay
Cidina dan uguma jirto xaaladda cakiran
La daabacay torsdag 15 januari 2015 kl 11.18
Cabsi balaaran ayaa la soo gudboonaatey goobaha lagu cibaadeeysto ee dadyoowga haysta diimaha islaamka iyo yuhuudda, wixii ka dambeeyay dhacdadii argagixisada ee ka dhacday toddobaadkii tagey magaalada Paariis ee caasimadda dalka Faransiiska.
Urur-diimeedka Yuhuudda ee magaalada Stockholm ayaa adkeeyay ammaankiisa, sida ay shaacisay laanta ABC ee idaacadda la iska daawado ee SVT. Iyadoona ammaanka la adkeeyey uu ka mid yahay howlaha la xiriira ka war-haynta cidda soo galeeysa ama ka baxeeysa goobta cibaadada.
Kuleeylihii ina dhaafay ee 2014 ayay ahayd kolkii handadaad loo geeystey, iyadoona uu dhanka kale madaxa ammaanka ee urur-diimeedka Yuhuudda ee dalka Iswiidhen uu dhanka kale sheegay inuu aad kor ugu kacay cabsida loo qabo xarummaha ey leeyihiin qowmiyadda Yuhuuddu.
Cabsi dheeri ah ma dareentaa falkii Baariis ka dib?